आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सजिलो तरिका यस्तो छ, गते र बार नै तोक्न खर्च कति? (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सजिलो तरिका यस्तो छ, गते र बार नै तोक्न खर्च कति? (हेर्नुस् भिडियो)
admin May 4, 2021 जीवनशैली, भिडियो, रोचक	0
काठमाडौँ । जो पनि चाहन्छन कि सन्तान आफ्नो इच्छा अनुसार होस् । कसैलाई छोराको रहर हुन्छ भने कसैलाई छोरीको । चिनिया बैज्ञानिकहरुका अनुसार छोरा वा छोरीको छनौट आफ्नो इच्छामा भर पर्दछ । तपाईं छोरा चाहनु हुन्छ कि छोरी ? चिनिया बैज्ञानिकहरुले एउटा चार्ट बनाएका छन ।
मानिसहरू भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । अझै भनु हिन्दु परम्परावादी सँस्कृतिमा त प्राय सबै दम्पत्तिको चहाना नै कम्तिमा एक छोरा त हुनैपर्छ । तर अचेल यस्ता सोच परिवर्तन हुदै गैहेका छन् । जे जस्तो भए पनि यदि तपाइँहरूलाइ चाहे अनुसारकाे बच्चा जन्माउन भने पक्कै मन लागेकै हुनुपर्छ ।
यदि तपाईं चार्ट अनुसार गर्नु हुन्छ भने तपाईंको इच्छा अबस्य पुरा हुनेछ । यो चार्टमा १०० प्रतिसत सत्यता रहेको यो चार्टको उपयोग गर्नेहरु ठोकुवा गर्छन तर बिशेषग्यहरुको भनाइ अनुसार यो चार्टको सत्यता ९९ प्रतिसत छ ।
आज हामी पनि तपाइलाइ यहि चार्टको प्रयोग गरेर कसरि यस्तो गर्ने भन्ने बारे सबै जानकारी दिदैछौ भिडियोबाट । यस भिडियोमा तपाइलाइ देबकी कार्की नामकी यी युवतीले बताउनुहुनेछ कि हामीले कसरि यस विधिको प्रयोग गर्दा र कति खर्चमा गर्न सकिन्छ भनेर । साथमा तपाइलाई देबकीले गते र बारनै तोकेर बच्चा जन्माउने तरिकाको प्रक्रिया पनि बताउनु हुनेछ ।
हेरौ निकैनै प्रभाकारी मानिएको यो भिडियोः